अभिनेत्री ऐश्वर्याबारे यी कुराहरु कमैलाई थाहा छ – Khabar Silo
१. ऐश्वर्याले आफ्नो जीवनमा पहिलो विज्ञापन केमिल ब्राण्डस्को लागि गरेकी थिइन् । र त्यतिवेला उनी ९ कक्षामा पढ्थिन् ।२. आजसम्म चुनिएका सबै मिस वल्डर्समा भोटिङको आधारमा ऐश्वर्यालाई २ पटक २००० र २०१० मा सबैभन्दा सुन्दर युवती घोषणा गरिएको थियो ।
३. सन् १९९४ मा जब ऐश्वर्या मिस वल्र्डको अवार्ड जित्न सफल भइन् तब उनले इवेन्टको होस्टले डेटको लागि सोधेको थियो । तर उनले यो अफर ठाडै अस्विकार गरेकी थिइन् ।४. ऐश्वर्याले मेडिकलको पढाई पूरा गरेर उनी मोडलिङमा आउन चाहान्थिन् तर धेरै सुन्दरी भएको कारण उनलाई थुप्रै अफर आउन थाल्यो त्यसकारण उनी यो काममा आउन बाध्य भइन् ।
५. सन् २००७ मा अभिषेक बच्चनसँग बिहे गरेर बच्चन खानदानकी बुहारी बनेकी थिइन् ।६. आमा बनेपछि छोरी आराध्याको लागि धेरै समय बलिउडबाट टाढा रहेकी थिइन् ।७. ऐश्वर्याको आफ्नो बारेमा लेखिएको आर्टिकल कलेक्सन गर्ने बानी छ ।८. ऐश्वर्याले २ पटक फिल्मफेयर अवार्ड जितिसकेकी छिन् ।९ . भारत सरकारले उनलाई पद्मश्री पुरस्कारले सम्मानित गरिसकेको छ ।
डा रुना झा राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाकी निर्देशक हुन्। परिवारमा दाजुभाइ नभएपनि रुना बहिनीहरु भाइटीका लगाउँछिन्। भन्छिन् दाजुभाइलाई मात्र टीका लगाइदिने चाड होइन यो। हामी ५ जना दिदीबहिनी छौँ। म भने जेठी हुँ। जसमध्ये ३ जना डाक्टर छन् र १ जना वकिल छन्। २ जना विदेश छन् र बाँकी हामी ३ जना यता हुन्छौँ। दाइभाइ नभए […]
काठमाडौ । करिब १४ बर्षदेखि नेपाली चलचित्र क्षेत्रबाट हराएकी नायिका विपना थापा अहिले नेपालमा छन् । उनी फेरी नेपाली फिल्ममा कमब्याक गर्ने सोचमा पुगेकी छिन् । भारतीय मुलका आयुतोष भारद्वाजसँग विवाह गरेपछि उनी भारतमै बस्दै आएकी छन् । वृन्दावनमा बस्दै आएकी विपना अहिले दुई वर्षको अन्तराल पछि नेपाल आएकी हुन् । उनी बारम्बार नेपाल आइरहन्छिन् […]